Avy amin'ny toerana hafa aiza ny Pool Pool an'ny onja lehibe indrindra eto an-tany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Avy amin'ny toerana hafa aiza ny Pool Pool an'ny onja lehibe indrindra eto an-tany
Toeram-pisominan'ny onja indrindra eto ambonin'ny tany
Nanomboka ny ivon-toerana fialamboly vaovao amoron-drano izay ahitana ny dobo onja-dranomasina miorina amin'ny rano lalina indrindra any Hoakalei Resort ao amin'ny Ewa Beach, manamorona ny South Shore of Oahu any Hawaii.
Ireo toerana fizahan-tany any Hawaii dia vao mainka nitombo tamin'ny herin'ny “tsy maintsy traikefa” ho an'ny mpitsidika sy ny mponina.
Ny dobo Wai Kai Wave, no ho manintona indrindra ny ivom-pivarotana, fisakafoanana ary fialamboly 300 tapitrisa dolara amerikana.
Ny Hoakalei Resort vaovao any amin'ny ilan'ny Ewa any Oahu izay mitombo dia ahitana lagoon mirefy 52 hektara.
Ny dobo fitsangantsanganan'ny rano any Wai Kai lehibe indrindra no ho manintona indrindra ny ivom-pivarotana, fisakafoanana ary fialamboly mitentina 300 tapitrisa dolara amerikana miorina ao amin'ny farihin'i 52 ha. General Contractor, Layton Construction, nifanaraka tamin'i Rosendin hananganana paompy misy herinaratra mankany anaty rano avo lenta, ny fametrahana ny dobo onjampeo ary hametrahana làlan-drivotra ambany hifehezana ny haben'ny onja ho an'ireo mpitaingina haavon'ny fahaiza-manao.
Izy ireo koa dia hanangana ny herinaratra rehetra, telecom, ary audio / visual-on trano izay tafiditra ao amin'ny dingana voalohany amin'ny toeram-pialamboly 277,300 metatra toradroa. Tafiditra ao anatin'izany ny fananganana ny fotony sy ny akorany ho an'ny bungalow enina izay hamboarina manodidina ny lagoon sy ny fametrahana herinaratra ankapobeny sy ny jiro manodidina ny toeram-pivarotana, ao anatin'izany ny fijanonana sy ny fanaovan-tany, ny rafitra fandoroana afo sy fiarovana ary ny tobin-jiro famahanana fiara elektrika.